ဒီအကူအညီကို ဘယ်သူက ပေးတာလဲ။
ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး လျှောက်လွှာဖိုင်ကို ဖြည့်ပါ။ sur le site de l’Agefiph.
Vous êtes sourd ou malentendant ? Contactez l’Agefiph en cliquant sur ဒီ link ကို.
အသုံးဝင်သော link များ မသန်စွမ်းလျော်ကြေးအကျိုးခံစားခွင့် (PCH) Prestation d’appuis spécifiques ပြင်းထန်သော Handicap (RLH) ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း L’aide au déplacement
နားကြားကိရိယာအကူအညီ ပြီလ 17th, 2022Tranquillus
ဖတ်ရန် ထိပ်တန်းမန်နေဂျာ - အစည်းအဝေးများကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်စီမံခြင်း